Mamaklub - Part 10
Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika Dikantsoratra Ny habibian'ny hena dia mamotipotika amin'ny tain-ketaheta, ary avy eo dia mafana. Fikarakarana sakafo
Poster 24.02.2019 27.03.2019 Second courses
Salade "Tosca" avy amin'ny fiaviana Italiana, antsoina hoe opera Giacomo Puccini. Famaritana ny fanomanana:
Poster 18.02.2019 27.03.2019 Second courses
Olona maro no tia manondraka akoho iray manontolo ho an'ny fialan-tsasatry ny fianakaviana. Manaova akoho amin'ny labiera vita amin'ny labiera. Misy karazana zava-manitra sy menaka vita amin'ny labiera mampitony sy manitra.
Vao haingana aho no nanoro hevitra momba ny fomba hanamboarana salady an'i Peterhof. Salady mofomamy miaraka amin'ny trobaky ny akoho, dipoavatra bolokaly sy karaoty. A
Sakafo mitahiry mofo
Sakafo manankarena, matsiro, marevaka miaraka amin'ny akoho sy mofomamy mofomamy. Raha mbola tsy nahandro an'io ianao, dia manoro hevitra anao aho mba hampitombo ny sakafo atoandro miaraka amiko.
Poster 15.02.2019 27.03.2019 Fampianarana voalohany
Tsiro tsotra "Kharcho"
Betsaka amintsika no mahazatra ny "tsako Georgiana" lasopy, fa tsy ny rehetra no tapa-kevitra ny hanomanana azy. Ary tsy misy ilana azy, satria misy safidy misy azonao atao farafaharatsiny
Tsy hifamaly aho, nefa mino fa manatsara ny asan'ny atidoha io siramamy io, noho ny voninkazo sy ny moka. Ankoatra ireo entana ireo dia misy hena sy legioma be dia be. Soup nourishing and
Page 10 avy 263«First«...89101112...203040...»Last »